यो हप्ता कुन-कुन राशिलाई शुभ रहला ? हेर्नुहोस् यसो भन्छन् चर्चित ज्योतिष ! [साप्ताहिक राशिफल]
यस हप्ताको राशिफल – (चैत्र २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म) | – डा. उत्तम उपाध्याय न्यौपाने
काममा सफलता मिल्नेछ। स्वास्थ्य राम्रो देखिन्छ। आर्थिक समृद्धि र उन्नतिको साता रहेको छ। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिल्नेछ। पारिवारिक सुख, शान्ति प्राप्त हुनेछ। घरपरिवारको सहयोग प्राप्त हुनेछ। विद्या, बुद्धि बढ्नेछ। नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ।
मनमा कौतूहल र चिन्ता रहनेछ। खेलाडीहरूका लागि साता उत्कृष्ट देखिएको छ। आफन्तबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। लेनदेन र आर्थिक पक्षमा केही तनाव रहला। कृषि क्षेत्रमा लाभ छ। विद्या, बुद्धि बढ्नेछ। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्ने देखिन्छ। सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ।
आयआर्जनका मार्ग प्रशस्त बढ्नेछन्। नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने साता रहेको छ। घरपरिवारबाट भरपुर सहयोग पाउनु हुनेछ। हजुरले गर्न खोजेको काममा बाधा परे तापनि बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार भने नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ। व्यापार, व्यवसायमा लाभको साता छ। नयाँ सवारी साधनका योग बन्लान्। पारिवारिक सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुनेछ।
दाजुभाइ, परिवारबीच माया, प्रेम बढ्नेछ। कुलकुटुम्बबाट सहयोग प्राप्त होला। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा मिल्नेछ। स्वास्थ्यमा केही समस्या रहला। नयाँ कार्यको थालनीका योगहरू बन्नेछन्। सन्तान सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुनेछ। आर्थिक पक्षमा केही बाधा र समस्या रहला। व्यापार, व्यवसायमा लाभको साता रहेको छ।
दाजुभाइ र परिवारको सहयोग प्राप्त होला। यात्रा सुखद हुन सक्नेछ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुनुहुनेछ। कृषि क्षेत्रमा लाभ छ। व्यापार, व्यवसाय मध्यम देखिन्छ। प्रेमीप्रेमिकाबीच केही कटुता उत्पन्न हुने देखिन्छ। नयाँ कार्यको थालनीको योग छ। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा मान, सम्मान मिल्ने देखिन्छ।
आय बढ्ने देखिन्छ। नचाहिँदा झुटा आरोप, प्रत्यारोप र लाञ्छना लाग्नेछन्। मनमा केही चिन्ता र कौतूहल रहन सक्नेछ। व्यापारमा भने लाभ छ। नयाँ कार्यको थालनी हुने देखिन्छ। देशविदेशको यात्राको योग छ। दाजुभाइबीच केही अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना हुनेछ। नयाँ सवारी साधनका योगहरू बन्नेछन्।
सन्तान सुख, शान्ति, समृद्धुि प्राप्त होला। मनमा उत्साह र उमङ्ग बढ्नेछ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने साता रहेको छ। पशु, चौपायामा लाभ छ। कृषि क्षेत्रमा निकै राम्रो देखिन्छ। आध्यात्मिक क्षेत्रप्रति लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा निकै विचार पुऱ्याउनुपर्नेछ।
साता उत्कृष्ट देखिन्छ। रोकिएको काम बन्नेछ। देशविदेशको योग बन्ला। मनमा उत्साह र उमङ्ग बढ्नेछ। आफन्तबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। मातापिताबाट सहयोग प्राप्त होला। सन्तान सुख, शान्ति, समृद्धि प्राप्त हुनेछ।
मनमा उत्साह र उमङ्ग बढ्नेछ। राजनीतिक क्षेत्र मध्यम देखिन्छ। खेलाडीहरूका लागि साता निकै राम्रो देखिन्छ। यात्रा मध्यम रहला। छात्रछात्राहरूका लागि साता त्यति राम्रो देखिन्न। दाम्पत्य जीवनमा प्रेम, माया, सद्भाव बढ्नेछ। कृषि क्षेत्रमा लाभ छ।
व्यापार, व्यवसायमा श्रीवृद्धिको साता रहन सक्नेछ। नयाँ कार्यको थालनी होला। स्वास्थ्यमा केही समस्या रहला। दाजुभाइबीच केही कटुता उत्पन्न हुन सक्नेछ। दाम्पत्य जीवनमा खुसी, उत्साह, उमङ्ग बढ्नेछ। देशविदेशबाट खुसीको खबर सुन्न पाउन सक्नुहुनेछ। रोकिएको सम्पत्ति फर्कन सक्नेछ। कृषि क्षेत्रमा लाभको साता छ।
मनमा उत्साह र उमङ्ग बढ्नेछ। शिक्षा क्षेत्र निकै राम्रो देखिएको छ। खेलाडीहरूका लागि पनि साता निकै राम्रो देखिएको छ। दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवनमा सुख, शान्ति मिल्ला। उन्नति, प्रगतिको साता छ। घरपरिवारबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। नयाँ कार्यको थालनी होला। जागिरमा केही अप्ठ्यारा र बाधाका पक्ष रहन सक्नेछन्। व्यापारमा लाभ छ।
साता मध्यम छ। आर्थिक पक्षमा केही बाधा होला। परिवारमा झैझगडा हुन सक्नेछ। लेनदेनमा निकै बिचार पुऱ्याउनुपर्ला। मनमा उत्साह र उमङ्ग बढ्नेछ। यात्रा सुखद हुनेछ। स्वास्थ्यमा केही समस्या रहला। रोकिएका काम बन्न सक्नेछन्। तीर्थस्थलको भ्रमणले आनन्दको अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ।
प्रकाशित : आइतबार, चैत २४, २०७५०२:३५